COVID-19 ကြောင့် အသက်အန္တရာယ်အပြင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးလဲ - Hello Sayarwon
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါတစ်ခုခု ဖြစ်ပွားကူးစက်ပြီဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကတော့ ဖြစ်စမြဲပါ။ ဒါ​ကြောင့်လည်း ရောဂါကိုကို မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်ကာကွယ်တာက အကောင်းဆုံးပါလို့ ပြောကြတာပေါ့။
ဆီးချို ဖြစ်ရင် နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာ၊ မျက်စိကွယ်တာ၊ နှလုံးထိခိုက်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်သလို သွေးတိုးရင်လည်း နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ လေဖြတ်တာ၊ နှလုံးရောဂါ စတာတွေကို ခံစားရပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ အခုလက်ရှိ ကမ္ဘာတလွှားမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ် ဖြစ်ရင်လည်း နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ အထပ်ထပ် ပြောနေရတာပါ။
ကိုဗစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
Covid -19 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရလို့ ပြင်းထန်မယ်ဆိုရင် အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုကို ခံယူရနိုင်သလို အခန့်မသင့်ရင် သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အသက်မသေဆုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် နောက်ပိုင်းမှာ အခုလို ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မပေါ့ဆဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
နှလုံး ကြွက်သားများ ထိခိုက်ပျက်စီးပြီး ရေရှည်မှာ နှလုံးက ကောင်းစွာ အလုပ် မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် နှလုံးရောဂါပြဿနာ အမျိုးမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်
အဆုတ် အတွင်းရှိ လေအိတ်ငယ်များ ပျက်စီးသွားပြီး အဆုတ်တွင် အမာရွတ် ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အမာရွတ် ကျန်ခဲ့ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကတော့ အသက်ရှူရခက်တာ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ခံစားရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသက်ငယ်ရွယ်သူတွေမှာ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောစနစ် ထိခိုက်ပြီး လေဖြတ်တာ၊ အတက်ရောဂါ၊ အကြောသေရောဂါ (Guillain barre syndrome) ဖြစ်ပွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး။ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်ပွားခြင်း (Parkinson) ရောဂါ၊ မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးတဲ့ (Alzheimer) ရောဂါ စတဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ သွေးကြောများအတွင်း သွေးခဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဦးနှောက် သွေးခဲခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ခြင်း၊ ခြေ​ထောက်သွေးပြန်​ကြော သွေးခဲပိတ်ဆို့ခြင်း ပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အသည်း နဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ နာတာရှည်ရောဂါရှိသူတွေမှာဆိုရင် အလွန်အမင်း မောပန်းခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူရ ခက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း ပြဿနာများကို ပုံမှန်ထက် ပိုပြင်းထန်စွာ ခံစားရတာ ကာလရှည်ကြာ ခံစားရတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရချိန်မှာ သီးသန့်နေထိုင်ရတာကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေအနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ အထီးကျန်တာ၊ စိုးရိမ်စိတ် လွန်ကဲတာလိုမျိုး စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် အခြားသော ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ခံစားရနိုင်တာကြောင့် ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကို မကူးစက်ခံရအောင် ကာကွယ်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ကဲ….. အားလုံး မကြာခဏ လက်ဆေးတာ၊ လူထူထပ်တဲ့ နေရာတွေကို မသွားဖြစ်အောင် ရှောင်တာ၊ အပြင်ထွက်ရင် နှာခေါင်းစည်း တပ်တာ၊ အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် စားသုံးတာ၊ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်စက် အနားယူတာတွေ လုပ်ပြိး ကိုဗစ်ကို အတူကာကွယ် ကြစို့လား။
မိမိကစလို့ ကိုဗစ်ကို သေချာလေး ကာကွယ်ပေးပါနော်….. Hello ဆရာဝန် ပရိသတ်ကြီးရေ
What are complications of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19)? https://www.medscape.com/answers/2500119-197504/what-are-complications-of-patients-with-coronavirus-disease-2019-covid-19 Accessed Date 1 September 2020
What are the potential complications of coronavirus disease 2019 (COVID-19)? https://www.medscape.com/answers/2500114-197519/what-are-the-potential-complications-of-coronavirus-disease-2019-covid-19 Accessed Date 1 September 2020